आइफल – तिमीसँग बाँच्दा - शखदा साहित्य
आइफल – तिमीसँग बाँच्दा
12:03 AM संस्मरण
फ्रान्सबाट फर्केपछि म जयाजीको घरमा बस्ने कुरा तय भएको थियो । मलाई लिन वाटर लु स्टेशनमा बुद्धि दाइ आइपुग्नुभएको थियो । जयाजीको घरमा आएपछि जयाजीलाई लेख्नका लागि केही पेपर मागेँ । उहाँले मलाई मोटो डायरी हातमा थमाइदिनुभयो । मैले ‘भो दुइचार वटा पेपर भए हुन्छ’ भन्दा पनि उहाँले पटक्कै मान्नुभएन ।
‘तपाईंले यो डायरी भर्नुपर्छ साथी ।’ साथी जयाको अनुग्रहयुक्त आत्मीय बोलीले मलाई गलाएको थियो । त्यसो त बेलायतमा संस्मरण विमोचन हुने र पुस्तकको बारेमा समीक्षात्मक टिप्पणी गोपीकृष्णजीले गर्ने भनेपछि मेरो संस्मरण ‘सिर्जना र सन्त्रास’को पिडीएफ फाइल पठाइसकेकी थिएँ । मेरो संस्मरण ‘सिर्जना र सन्त्रास’ पढिसकेका गोपीकृष्णजी भेट हुँदैपिच्छे मेरो सस्मरणसङ्ग्रहको ‘के सारो हाउ..!’ स्तम्भ निकै मन परेर मलाई बारम्बार जिस्काइरहनु हुन्थ्यो । अनि भेट हुँदैपिच्छे संस्मरणमा यो कुरा त पक्कै आउँछ होला नि भनेर मलाई जिस्काइ रहनुहुन्थ्यो । धेरै साथीहरूले ‘बेलायत भ्रमणको बारेमा चाहिँ पक्कै लेख्नुपर्छ है ।’ भनेर हुटहुटी लगाइरहनु भएको थियो । यो हुटहुटीको भेल भेटमा त छँदै थियो अझ बढी अहिले निकै चलेको भेटघाटको चौतारो फेसबुकमा भेलबाढी उर्लेर नै आउने गरेको थियो । सबै भेलबाढीलाई साम्य बनाइ बेलायतको यात्रामा यात्रारत थिएँ म । अरू यात्राको जे जस्तो भए पनि मेरो यो पहिलो विदेशको साहित्यिक भ्रमणलाई पक्कै शब्दमा अमर बनाउँछु भन्ने दृढसंकल्पले मेरो मनमा इच्छाको खिचडी पकाइरहेको थियो । मेरो लेखनको फाँटमा एउटा यात्रासंस्मरणको विज त्यहीसमय मैले रोपिसकेकी थिएँ । बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणभरि मैले उक्त बिज हुर्काउन र मलजल गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेँ । भ्रमण र सम्मेलनको प्रत्येक पललाई मैले आफूभित्र जीवित बनाइरहेँ । परदेशमा लेख्नको लागि अनुकुल वातावरण हुन सकेको थिएन । फ्रान्सबाट फर्केपछि चाहिँ जयाजीको एकान्त कोठामा केही लेख्ने अनुकुलता मिल्यो । जयाजीले डायरी दिनुबित्तिकै भ्रमणलाई यसरी खेस्राको रूपमा अभिलेख गर्न थालेकी थिएँ ।
शीर्षक ऐतिहासिक सम्मेलन र मेरो बेलायत भ्रमण वा बेलायतबाट बिदा लिँदा
बुदाँहरू १)बेलायतबाट बिदा लिँदा
२) आइफल – तिमीसँग बाँच्दा
३) सत्यको विजय
३)इतिहासका स्वर्ण अक्षरले लेखिएको त्यो क्षण
४)कार्निभलको त्यो मेला
यति बुँदा लेखिसकेपछि म सर्वप्रथम ‘आइफेल–तिमीसँग बाँच्दा’को बुँदामा पोखिन पुगँे । मेरो जीवनको यात्रामा म आइफल टावरमा पुग्दाको जस्तो रोमाञ्चित कहिल्यै कतै हुनसकेको थिइनँ । टावरमा पुगेर मैले पानामा त्यहाँ पुग्दा मलाई कस्तो अनुभूति भयो त्यो कुरा लेखेकी थिएँ । त्यहाँ पुग्दा म यति रोमाञ्चित भए कि सकेसम्म म त्यो अनुभूति चाँडो शब्दमा उतार्न चाहन्थे । त्यसैले मैले पहिलो संस्मरण ‘आइफल– तिमीसँग बाँच्दा’ लेख्न पुगे ।
‘जीवनका अनुभूतिले अनेकौँ रङ्ग बोकेर हिँड्दो रहेछ । मैले सायदै कल्पना गरेकी थिएँ हँुला । एकदिन आइफल टावरमा चढछु भनेर । त्यो कल्पना अहिले यथार्थ भएको छ । जीवनको अनुभूति बोकेर हिँड्ने क्रममा हामी अनेकौँ यात्रामा दौडिरहेका हुन्छौँ । बालककालदेखि नै म पहाड चढेको सपना देख्थे । कहिलेकाहीँ माथिबाट तल हेर्दा डराइरहेकी हुन्थे र त्यो पहाड चढाइ आज आइफल टावरमा आएर साकार रूप लिएको छ । सपनामा पहाड चढनु सफलताको प्रतीक मानिन्छ । सायद मेरो जीवनले पनि एउटा सफलताको उचाइ बोकेर आइफेल टावरबाट मेरो सपनालाई विपनामा परिणत गरिरहेको छ । यो सौन्दर्यको अद्भूत दृश्य सायदै कतैबाट देख्न सकिएला ! टावरको मुनि सेन नदी मलीन मुस्कान बोकेर बगिरहेकी छे । स्टीमरमा खचाखच पर्यटक बोकेर सेन नदी दौडिरहेकी छे । सेन नदी पर्यटकको रमझम देखेर नयाँ दुलहीझँै लज्जालु मुस्कान बोकेर शालीन भावमा चहलपहल गरिरहेकी छे । लाग्थ्यो आइफल टावर आत्मास्वाभिमानको बिशाल छाती लिएर पेरिस सहर र सेन नदीलाई आफ्नो आस्तित्वको आभास गराइरहेको छ । त्यसैले विश्वको लाखौँ पर्यटकले उसलाई आरोहण गर्दा पनि ऊ पटक्कै बिचलित भएको छैन । अझ ऊ गौरव र आत्मस्वाभिमानको प्रतीकात्मक कथा बनेर विश्वलाई पढाइरहेको छ । मलाई टुप्पोमा आएर करीव तीनसय मिटर तल हेर्दा पटक्क डर लागेको छैन । बेलाबेलामा यो टावर हल्लिएझैँ लाग्छ । पर्यटकहरू खचाखच छन् । अग्लोबाट तल हेर्दा देखिने डर र त्रास मलाई पटक्कै भएको छैन । म पेरिस सहरको मनोरम सौन्दर्यमा आफैलाई हराउँछु । टावरको एकतर्फ जोडले हावा चलिरहेको छ । अर्को तर्फ म साथी गीता छौँ । अब केहीछिन पछि हामी फोटो खिच्न लाग्नेछौँ ।’
टावरको टुप्पामा पुगेर मैले यी माथिका वाक्यांश एउटा पेपरमा लेखेकी थिएँ । मनमा अनेकौँ अनुभूति र भावहरू तछाडमछाड गर्दै टावर हल्लिएझैँ मन हल्लिरहेको थियो । तर सबै भावलाई एकैछिनको बसाइमा पोख्न नसकिदो रहेछ । टावर चढ्न फेदीमा बस्दादेखि नै मेरो मन त्यसैत्यसै विचलित भएको थियो । म कसरी यहाँ आइपुगेँ ? मनभित्र प्रश्नका उत्तरहरू एकपछि अर्को पाना उघ्रिएझँै उघ्रन तम्तयार थिए । हामी आइफल टावर चढ्न फेदीमा टिकट काटेर लिफ्टमा चढ्न लाइनबद्ध भएर बसेका छौँ । आइफेलको भव्यता देखेर म अघि देखि नै निकै रोमाञ्चित भइरहेकी थिएँ । आइफेलको अगाडि रहेको ठूलो पानीको फोहरा भएको दृश्यलाई आँखाभरि बिछ्याएर आइफेल टावरलाई हृदयमा उभ्याएका थियौ । आइफेलको अगाडि रहेको ठूलो पानीको फोहरा भएको दृश्यलाई आँखाभरि बिछ्याएर आइफेलको आँगनमा आइपुगेका छौँ । आइफेल टावरको चार ठूलठूला स्तम्भ जमिनमा यसरी गाडिएका छन् कि ती आफै जमिनबाट उम्रिएका हुन् कि झैँ लाग्दथे ।
आजभन्दा करीब सवासय वर्षअगाडि तयार भएको यो आइफेलको भव्यता देखेर भित्र कताकता डर लागेजस्तो अचम्म लागेजस्तो भएर अनेकौँ अनुभूतिले छोपेजस्तो भएको थियो । अहिले हामी आइफल टावरको टुप्पाबाट तलतिर झर्दै गरेको लिफ्टको प्रतीक्षामा छौँ । हामी उभिएको छेउमा ठूलठूला पहेँला घ्याम्पाजस्ता मेसिन उठेर माथि आउन थाल्यो । यसरी आउँदा माथिका लिफ्ट तलतिर झर्दो रहेछ । त्यो दुई खन्डमा बाँडिएको लिफ्टमा झण्डै पचासजना जति पर्यटकहरू राखिदो रहेछ । त्यो स्वचालित लिफ्टलाई ठूलठूला फलाममा डोरीले तल झार्दै र माथि तान्ने काम गरिदोरहेछ ।
यसरी चारैतिरको स्तम्भबाट यस्ता लिफ्टहरूमा मानिसहरूलाई टावरको सेकेन्ड फ्लोरमा पु¥याइदो रहेछ । त्यसपछि अर्को सानो लिफ्टमा करीब बीस जनाजतिलाई टुप्पामा लागिदो रहेछ । निकैबेरको पर्खाइपछि हामी सेकेन्ड फ्लोरमा पुग्यौँ । त्यहाँ मानिसहरू खचाखच थिए । धेरै जसो फोटो खिच्नमा व्यस्त थिए । हामी पनि एकछिन फोटो खिचेर टुप्पामा जाने लिफ्ट चढ्न लाइनबद्ध भयौँ । झण्डै पैतालिीस मिनेटको प्रतीक्षापछि हामीले सानोे लिफ्ट चढ्ने सौभाग्य पायौँ ।
यतिञ्जेल म भावनामा नै डुबिरहेकी थिएँ । मनमा फ्रान्स भ्रमणको तयारीको नोस्टाल्जियाले वर्तमानको ढोका ढकढकाउन थाल्यो । क्रमशः सबै दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै मेरो स्मृतिबिम्बमा उघ्रन थाले ।
फ्रान्स आउन म मनोवैज्ञानिकरूपले तयार थिइनँ । किनभने फ्रान्समा कोही नातेदार वा चिनजानको मानिस नहुनु यस्को प्रमुख कारण थियो । तर मित्र जया र विकलको बारम्बारको फ्रान्सको भिसा पनि जसरी भए पनि लिएर आउनू
भन्ने आत्मीय आग्रहलाई मैले नकार्न सकेको थिइनँ । फ्रान्सको भिसा लिनु मेरो लागि अत्यन्त बोझिलो काम भएको थियो । तर पनि साथीहरूको आत्मीय भावले लफ्रक्क भिजायो मलाई अनि त्यो बोझिलो काम पन्छाउन फ्रान्सको भिसा अप्लाई गर्न गोविन्ददाजु र गीताजीसँगै फ्रान्स एम्बेसी पु¥यायो मलाई । युके उड्नु पाँच दिन अगाडि हामीले भिसाको लागि पासपोर्ट एम्बेसीमा बुझाएका थियौँ । हामीलाई सोमबार पासपोर्ट दिने भनिएको थियो तर सोमबार नदिएर मङ्गलबार दिने भनियो । हाम्रो युकेको उडान बुधबार थियो । तर हातमा पासपोर्ट थिएन । मनमा अनेकौँ शका र उपशकाले धर्ना दिइरहेका थिए । मङ्गलबार बिहान फ्रान्सको भिसा हातमा परेपछि मात्र युकेजान पाउने सफलताले मनमा खुसीको पङ्खा लगाएर नाच्न थालेको थियो । हातमा भिसा लागेको पासपोर्ट परेपछि मात्र आफू वास्तविक रूपमा सपनाको सहर युके पुग्ने भए भनेर मनमा उमङ्गको बाँसुरी बज्न थालेको थियो । सबै साथीभाइ र इष्टमित्रबाट पाएको शुभकामनाहरू बाँसुरीको मिठो धून भएर कानमा गुन्जन थालेपछि मन रोमाञ्चित र हर्षित भएर नाच्न थालेको थियो । कहिल्यै बोइङ्ग नचढेको यो तन मन भावनाका अनेकौँ लहरले उचालिन र पछारिन थालेको थियो । बेलायत जाने भनेपछि नै मैले यो सम्बन्धि यात्रासस्मरणका केही थोरुै पुस्तक पढ्न थालेकी थिएँ ।
अहिले गीताजी र म लाइनबद्ध छौ । युके आएदेखि हामी एकछिन पनि छुट्टिएका छैनौँ । अहिले गफका विभिन्न च्यानलहरू फेर्दै हामी गप्फिन मस्त छौँ । आइफेल टावरको फलामको यो बनोट देखेर म यति मन्त्रमुग्ध हुन्छु कि कसरी यी यन्त्रहरूलाई एकअर्कामा जोडेर यत्रो भीमकाय मेसिन बनाउन इन्जिनियरहरू सफल भए होलान् । मनले विचारसँग दोहरी खेल्न थाल्यो । यतिधेरै वर्षसम्म ती फलामहरूलाई कसरी स्याहारसम्भार गरेर जतनले राखिएको होला भन्ने उत्सुकताले मनको पहाडलाई खोतल्न थाल्यो । फ्रान्सको भौतिक विकासमा यो आइफल टावरलाई उत्कृष्ट उदाहरण मान्नुपर्छ । यसले गर्दा आज फ्रान्सले पर्यटकक्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकेको होलाझै लाग्यो मलाई । मैले आइफेल टावरसम्बन्धी अघिपछि केही जानकारी लिएकी थिएँ । यो टावर इन्जिनियर गुस्ताभ आइफलले सन् १८८९मा दुई वर्ष दुई महिना पाँच दिन लगाएर बनाएका थिए । वर्षको करीब ६ करोड मानिसहरू यो टावर को अवलोकनलाई आउँदथे । संसारको सातौँ आश्चर्य मध्ये एक पर्ने यो टावर फ्रान्सको मात्र नभई विश्वको नै ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा स्थापित रहेछ । यसरी आइफेल टावर सम्बन्धि छोटो जानकारी मलाई थियो ।
म यो टावरको प्रत्येक सानासाना यन्त्रहरूमा आँखा डुलाउन पुग्छु । ती साना यन्त्रहरू यति धेरै मिलाएर राखिएका छन् म निकै अचम्मित बन्दछु । हामी टुप्पामा पुग्न लाइनबद्ध भएको छौँ । यस दोस्रो तलामा रेस्टुरेन्ट र केवीनहरू छन् । मानिसको सुरक्षाको लागि ठूलठूला तारको बार बनाइएको छ । भने प्रत्येक ठाउँमा कता जाने भन्ने विषयमा राम्ररी निर्देशन दिइएको छ ।
एकछिन पछि हामी लिफ्टमा चढ्छौँ । यो लिफ्टलाई चलाउन भित्र एकजना मानिस बसेका थिए । लिफ्ट माथि जानथालेपछि मनमा डरले बास लिएजस्तो भयो । सिसाबाट टाढा र मुनिका दृश्यहरू देखिइरहेका थिए । फलामका ठूलठूला विमहरूलाई छिचोल्दै लिफ्ट माथिजान थाल्यो । अहो यहाँबाट झरे कसरी तल पुगिएला? मानिसले यात्रामा मनको डरलाई निकालेर घरमा नै ताला लाएर हिँडेमात्र यात्राको वास्तविक मजा लिन सकिन्छ भन्ने आफ्नो मनको सिद्धान्तले आफैलाई सिँगारेर राखे आइफेल टावरको सौन्दर्यसँगै । त्यसपछि मन केही शान्त भयो ।
माथि पुगेपछि मलाई मेरो सगरमाथाको सम्झना भयो । वास्तवमा उचाइ भनेको उचाइ नै हो । मेरो सगरमाथाबाट पनि यस्तै दृश्य देखिएला जस्तो लाग्यो । आइफेल टावर र मेरो सगरमाथाबीच ठूलो भिन्नता थियो त्यो के भने मेरो सगरमाथा प्रकृतिको अनुपम उपहार थियो भने आइफेल टावर मानिसको उच्च बौद्धिकता र लगनीलताको प्रत्यक्ष उदाहरण थियो । टुप्पामा पुगेपछि लाग्यो म आइफल टावरसँग समाहित भएकी छु । म यसैभित्र हराएकी छु । सम्पूर्ण विश्वलाई आत्मास्वाभिमानको पाठ पढाइरहेको आइफल टावरलाई म यसरी पढिरहेकी छु ।
‘आइफल तिमी महान छौ । कसरी तिमी ससारलाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै सेन नदी र पेरिस सहरलाई आफ्नो भव्यता र सुन्दरताको परिचय दिइरहेका छौँ ।’ यो परिचय तिमीले त्यत्तिकै पाएका हैनौ । तिमीले कति लडाई लड्नुप¥यो होला यो परिचय दिन । तिमीले ठूलो सङ्घर्ष गरेका छौँ । आज लाखौँ पर्यटकले तिमीलाई आरोहण गर्दा पनि तिमी पटक्क विचलित भएका छैनौ । हो तिमीबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । एउटा सङ्घर्षशील, अपराजित मानसिकता, उत्कृष्ट कालगढीको सफल नमूना बनेर तिमी हाँसिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ तिमी म हौ र म तिमी हुँ ।’
आइफलाई मैले यसरी पढेँ । मन असाध्यै रोमाञ्चित र उद्वेलित भएको थियो । मैले मेरा प्रिय मित्र जया र विकललाई सम्झे र धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ । उनीहरूले आत्मीय आग्रह नगरेको भए आज म विश्वलाई आफ्नो आत्मस्वाभिमानको पाठ पढाउने आइफललाई आरोहण गरी आफूभित्र समाहित गर्न सक्ने थिइनँ हुँला । मलाई लाग्यो मेरा अघिका पूर्खाले यो आइफललाई हेर्न पाएनन् भनौँ सकेनन् । अब मेरा आउने पुस्तामा पनि कसैले हेर्न पाउला कि नपाउला मेरो मनले मनको तार लाई रेट्न थाल्यो मेरो जीवनले ठूलो मोक्ष पाएको राग अलाप्न थाल्यो । आज मैले विश्व प्रसिद्ध टावर आइफल टावरलाई आरोहण गरेकी छु । मेरो जीवनको लक्ष्य आइफेल टावरको अस्तित्वसँगै प्रतीकात्मक भएर मनभित्र उभिएको छ । मेरो मनमा अर्को आइफेल टावर बन्दैछ सघर्ष, अस्तित्व, लगनशीलता, साधना र आत्मस्वाभिमानको ।
म डुबिरहेको छु, आइफेलको भव्यतामा । जति नै आइफललाई पढ्न खोज्छु उति नै आफूले कम पढेझैँ लाग्छ । आइफलको भव्यतासँगै यसका निर्माणकर्ता इन्जिनियर गुस्ताभ आइफलको प्रतिबिम्ब मेरो आँखामा उत्रन्छ । जस्को फोटो टावरको ठाउँठाउँमा राखिएको छ । टावरको टुप्पामा एउटा केविनभित्र उनै इन्जिनियरको मूर्ति अहिले बोलुलाझँै गरी राखिएको छ । साथमा अन्य एक स्त्री र अको एकजना सहयोगीको मूर्ति पनि छ । मलाई लाग्यो प्रतिभा कला, लगनशीलताका पयार्यबाची बनेका तिनै इन्जिनियर गुस्ताभ आइफल नै टावर हुन कि भनेझै लाग्यो । यसरी मैले विभिन्न कोणबाट आइफललाई पढेँ ।
शब्दलाई आकृतिसँग संयोजन मिलाउन हामी फोटो खिच्न तम्तयार हुन्छौ । टावरको टुप्पामा धेरैजसो मानिस फोटो खिच्नमा नै व्यस्त देखिन्थे । टावरबाट पेरिस रहरको टाढाटाढाको दृश्यलाई आँखामा कैद गरेर राखेँ मैले । टुप्पाबाट देखिने सबै दृश्यलाई आँखा र मनमा समेटेपछि हामी तल झर्ने मनसायले सिढीबाट ओरालिन्छौँ । कहाँकहाँ धेरै तल मानिसहरू एउटा बिन्दु सल्बलाइझँै सल्बलाएका देखिन्छ । निकै तलझरेपछि चारवटा स्तम्भ जोडिएको एउटा ठूलो क्षेत्रफल भएको फराकिलो बजार जस्तोमा हामी आइपुग्छौ । यहाँ आइपुग्दा हामी टावरमा छौँे जस्तो पनि लागेन । यो एउटा व्यस्त बजारजस्तो लाग्यो । रुखबिरुवा फूलबारी भएको अनि ठूलो रेस्टुरेन्ट र सिनेमा हल भएको बजारजस्तो लाग्दथ्यो । हामी चारैतिर फनफनी घुम्यौ र फोटो खिच्यौँ । अघि माथि जाँदा हामीले यो भाग देख्न पाएका रहेनछौँ । अहिले हिँडेर आउँदा थाहा पायौँ । यसरी हिँडेर आउँदा राम्रो गरेको लाग्यो । अब फर्कनलाई सूत्र मिलाउन थाल्यौँ । अब हिँडेर जान निकै तल रहेछ । त्यसैले बरु लिफ्टबाट जाऊ भन्ने मनको तार मिलेपछि हामी लिफ्टका लागि लाइनबद्ध हुन्छौँ । केही बेरको प्रतीक्षापछि लिफ्टले हामीलाई सिधै फेदीमा पु¥यायो । हामी अहिले फेदीमा थियौँ ।
जैविक प्रक्रिया वास्तवमा मानिसको जीवनको अत्यावश्यक कुरामा पर्दोरहेछ । त्यसपछि मात्र भावना र अनुभूतिका कुरा आउँदारहेछन् । आइफेल टावरको भव्यताको अनुभूतिमा डुबिरहेको मनलाई अहिले भोकले आक्रमण गरिरहेको थियो ।
हरिहरमामाको बुहारी ज्योति अर्यालले टावरमा खान भनी झोलामा प्रेमपूर्वक राखिदिएको चिप्स र बिस्कुटले टावरमा लाइनबद्ध हुँदा नै मुक्ति पाइसकेका थिए । फेदीमा आएपछि सर्वप्रथम हामीहरूलाई शौचको समस्याले आक्रमण ग¥यो । आइफेल टावरको फेदीको छेउमा रहेको ट्याइलेटमा मानिसको लाइन निकै लामो थियो । मलाई अचम्म लाग्यो, दिनमा नै हजारौँ पर्यटक हेर्न आउने आइफेल टावरमा किन एउटा मात्र ट्याइलेट राखेको होलाजस्तो लाग्यो । यस कुरामा चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि झै लाग्यो । हुन त अन्त पनि हुन सक्छ । शौचको कार्यलाई सुध्याइ गरेपछि हामी भोजनका लागि तडपियौँ । भाषाको अनभिज्ञताले हामीले आँखा अगाडिको सामान पनि किनेर खान सकेनौँ ।
निर्मलभाइले आइफेल टावरको प्राङ्गनमा छोडेपछि हामी आफै दिनभरि घुम्छौँ भनेर गफ हाकेका थियौँ नब्बेको स्पिडमा । अहिले ब्रेक लागेझै भयो । अब आइफेल टावरको अवलोकनपछि कता जाने भनेर सोच्दासोच्दै पानी पर्न थाल्यो । पानी छल्न सेन नदी माथि बनाइएको एउटा रेस्टुरेन्टमा पस्यौँ । के खाने ? उही भाषाको समस्याले हामी अलमलियौँ । र तुरुन्त बाहिर आयौँ । अहिले पानी रोकिइसकेको थियो । अब स्टीमर चढ्न दुई जनाको सल्लाह भयो । स्टीमर चढेर मानिसहरू घुमिरहेको देख्यौँ तर यो कहाँसम्म जाने हो, कति समय लाग्ने हो केही थाहा पाएनौ ? के गरौ त अझै मनमा अनिश्चितता बादल छ । अनिश्चितताको बादलमा मडारिदै बरु स्टीमर नचढौँ, नक्सा हेर्दै पेरिस गएर लुभ्र म्युजियम जाऔँ भन्ने हामी दुईको सल्लाह भयो । नक्सा हेर्दै, भाषा नबुझे पनि सोध्दै पेरिस गेटसम्म आइपुग्यौँ । पेरिस गेट आइपुग्दा सम्पूर्ण पार्टपूर्जा ढिला भइसकेका थिए । भोक थकान र हैरानले चुटेर हामीलाई लखतरान पारेको थियो । नजिकको एउटा बुकपसल जस्तो पसलमा सबै मानिस पसेको देख्यौँ । हामी पनि त्यतै पस्यौँ । यो पसल डिपार्टमेन्टस्टोर रहेछ । त्यहाँ पानी किन्यौ र एउटा सादा ब्रेड बोकेर बाहिरको फलैचाँमा बसेर निस्फिक्री खान थाल्यौ ।
अब भोकलाई हामीले पराजित गरिसकेका थियौँ । तर थकाइले चाहिँ जरो गाडेर शरीरका सम्पूर्ण पार्टपूर्जालाई समाएर बसेको थियो । गीताजीले पेरिस गेटको पारिपट्टि जाऔँ भनेर निकै चोटि भन्नुभयो तर म अलिकति पनि ढलमल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ । उहाँको तोलाको वचन खोलामा गएपछि आफ्नो भाउलाई घटाएर शून्यमा पु¥याउनु भयो र मेरो इच्छामा सम्झौता गर्न बाध्य हुनु भयो ।
ज्योति बहिनीले गीताजीलाई मोबाइल दिनुभएको थियो । अब हामीले त्यही मोबाइलबाट निर्मल भाइलाई बोलाएर घर जाने अन्तिम फैसला ग¥यौ । नभन्दै निर्मल भाइ र ज्याति वहिनी हामीलाई लिन आइपुग्नु भयो । बिहेको रमझमबाट समय चोरर हामीलाई लिन आउनुभएको थियो । हामीलाई घर पु¥याएर उहाँहरु फेरि बिवाह मन्डपतिर लाग्नुभयो । घरमा भात, दाल तरकारी सबै पकाएर तयार गरेर ज्याति बहिनी जानुभएको रहेछ । हामीलाई सबै कुरा देखाइदिएर भोक लाग्यो भने खानु है भनेर जानु भयो । अहो कस्तो आत्मीयता ! कत्रो प्रेम ! यो प्रेमको कस्तो परिभाषा होला ? ज्याति बहिनीलाई सोध्न मन लाग्यो । तर उहाँको बिवाहमा जनाउनुपर्ने हाजिरीको व्यस्तताले यो प्रश्नको दस्तावेज मेरै हृदयमा मात्र लेखियो । त्यो भोकमा त्यस्तो परिकारयुक्त भोजन देख्ता मेरो मनको हर्षले स्वर्गको विरचन गरिरहेको महसुस ग¥यो । मलाई लाग्यो मैले ठूलै धर्म गरेको रहेछु नत्र यो परदेशमा यो आत्मीययुक्त चौरासी व्यञ्जन पाउनु पेरिसजस्तो सहरमा इन्द्रको भाग्य नै मैले खोसेर लिएको हो कि झँै लाग्यो । हामी दुई भकाभकी मनमा खान इच्छाभएको खानेकुरा लिएर भोजनकक्षमा दाइँ गर्न थाल्यौँ । गीताजीले सुरुमा खरवुजा खाने इच्छा दर्ता गराउनु भयो मैले भने दाल, भाल, कुखुराको चाइनिज परिकारमा आफ्नो इच्छाशक्तिलाई सुदृढ बनाउँदै मैले सन्तुष्टिको मोर्चा कसेँ ।
धन्य ! ज्योति बहिनी, निर्मल भाई यो स्वर्गजस्तो देशमा इन्द्रको आसनलाई डगमगाउने धर्म तपाईँहरूले गर्नुभयो । कतै तपाईँले बली राजाले झैँ पाताल भासिनुपर्ने हुन्छ कि यो धर्मको ज्योतिलाई अलिक कम गर्नुभए घरको ज्योतिलाई अलिक राहत मिल्ला कि ?